भान्जीलाई जोगाउन खोज्दा आफैँमाथि नि*र्घात कु*टपिट भयो – दैनिक नेपाल न्युज
भान्जीलाई जोगाउन खोज्दा आफैँमाथि नि*र्घात कु*टपिट भयो
काठमाडौं, २७ चैत । सप्तरीमा भान्जीलाई कु*टपिटबाट जोगाउन खोज्दा एक युवक आफैँ नि*र्धात कु*टिएका छन् । राजविराज नगरपालिका १ बस्ने ३८ बर्षिय रामचन्द्र साहमाथि नि*र्घात कु*टपिट भएको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। उनी आफ्नै दाजु मिश्रीलाल र भतिजा अरबिन्द्रबाट नि*र्धात कु*टिएका हुन्। घाईते भएका रामचन्द्रलाई स्थानियले उपचारका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना गरेका छन्।
उनको टाउकोमा ६ वटा टाका लगाईएको छ भने शरीर भर चोटपटक रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाई छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बुधबार विहान ९ बजे तिर मिश्रीलालले घरमै पाहुना आएकी १० बर्षिया भान्जीलाई घरायसी विवादमा कु*टपिट गर्दै थिए।
उनी रोएको आवाज सुनेर बचाउन आएका रामचन्द्रमाथि मिश्रीलाल र उनका छोरा अरबिन्द रामचन्दर माथि नै खनिएका थिए । बाबु छोराको अ*न्धाधु*न्द ल*ठ्ठी प्रहारबाट रामचन्दर घटनास्थलमै वे*होस भएका थिए।
मिश्रीलाल र रामचन्द्र सहोदर दाजु भाई हुन । हाल दाजु भाईको बसोबास भने छुट्टाछट्टै रहेको छ । पि*डितका आफन्तले घटनामा संलग्न बाबु छोरालाई तत्काल प*क्राउ गरी कानून बमोजिम कार्यवाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन्। डिएसपी तिलकभारतीले घ*टनामा संलग्न बाबुछोरा फ*रार रहेको र खोज तलास भईरहेको जानकारी दिए।
से*क्स पा*वर बढाउने भिया*ग्रा कस्तो औषधि ? यसको सेवनले हा*नी गर्छकी गर्दैन ?
बिचरा के भयो यस्तो ! वेबारिसे अबस्थामा भेटियो श-व, फेवातालमा मृ-त भेटिएका व्यत्ति ! शेयर गरिदिनुहोला